Banyere Anyị - Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.bụ a pụrụ iche soplaya nke nkwado ihe. Ngwaahịa anyị gụnyere okpu baseball, okpu a kpara akpa ， egwuregwu, mkpuchi ihu anyanwụ, apron, akpa ịzụ ahịa, towel, glove na ihe ndị ọzọ.
Anyị nwekwara ike na-emepụta dị ka ndị ahịa si aghụghọ ma ọ bụ n'omume. A na-ebupụ ngwaahịa anyị na ụwa niile, dị mkpa n'ahịa nke European na North America.
Mere Iji Ogo
Ogo bụ ihe mbụ dị mkpa. Anyị na-elebara àgwà ngwaahịa ahụ anya, gụnyere ihe nke akwa, ngwa, ọrụ, mkpo, oge nnyefe, nchekwa yana ọrụ ndị ọzọ, were gabazie, ndị ọrụ QC ọkachamara anyị ga-eme ha na njikwa mma dị mma. Anyị mma na-nabatara niile nke anyị esenidụt ahịa na-enwe ezigbo aha. Na okwu, ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa anyị ezigbo ngwaahịa dị mma ọnụ ahịa.
Na 2016, ụlọ ọrụ anyị mepụtara ọrụ ọhụrụ, hydroxypropyl methyl cellulose, nke a na-ejikarị eme ihe maka simenti ciment, ciment Tile, Gypsum coagulation slurry, ciment ciment, mkpuchi ndị inyeaka. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko kpọtụrụ anyị, anyị nwere ike hụ na ị kacha mma mma na ọrụ maka gị.
Ike anyị nwere karịa 200,000 PC na otu ọnwa.
Anyị ji ezi obi na-atụ anya ịkwado ụlọ ọrụ ọ bụla ga-achọ iwepụta ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa ezi uche sitere na China, anyị na-achọkwa ịmebe mmekọrịta azụmahịa na ọbụbụenyi gị na gị ogologo oge dị ka ndị ahịa anyị ochie.
Anyị nwere ezi obi ma kpebisie ike ịkwado ndị ahịa anyị niile ma nwee olileanya ịmekọrịta mmekọrịta bara uru ma kwụsie ike na ndị enyi karịa .Ọ bụrụ na ị na-achọ okpu, mkpuchi, akpa ịzụ ahịa, akwa nhicha ahụ, akwa ahịa na China, biko kpọtụrụ anyị maka ihe Ajuju ọ bụla na-etolite, a ga-aza gị n'ime awa 24.